Farah - SahanTV
Ikke-kategoriseret / Af Farah
Gabar Soomaaliyeed oo u dacwooday hay’adda UN qeybta Qaxootiga Waxaa dhawaan maxkamadda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga dacwad geeyey qareen ay qabsatey gabar Soomaali ah oo 36 sanno jir ah,kuna nool wadanka Denmark, gabadhaas ayey dawladda Denmark kala noqotey sharcigii qaxootinimo sannadkii 2018, Gabadhaas oo ahayd qof ayadu shaqeysata wax dhaqaale ahna aan ka qaadan …
hay’adda qaxootiga “UN”, oo sheegtay in gabar Soomaaliyeed lagu celin karo Soomaaliya… Læs mere »
Wararka / Af Farah
AUN Cabdinuur Maxamed Ismaciil ayaa lagu aasey qabuuraha muslimiinta ee magaalada Odense Waxaa 03-07-2020 qabuuraha muslimiinta ee magaalada Odense , lagu soo aasey allaha u naxariisto marxuum Cabdinuur Maxamed Ismaciil. Xabbad ay rideen kooxo gangistarro ah oo is cayrsanayay, ayaahaleeshay Cabdinuur. Baaritaan dheer keddib, ayaa booliska magaalada Odense, caddeeyay in Cabdunuur uusan ka tirsanayn kooxahaas …
Gudd. cusub ee golaha shacabka oo maanta xilka si rasmi ah ula wareegay Læs mere »
Aarhus: Caabuqa Karoonaha, Xaafadda Vor Frue Sogn, ayaa qarka u saaran in la xiro Xaafad ku taal magaalada Aarhus oo magaceeda la yiraahdo “Vor Fue Sogn”, ayaa qarka u saaran in gagigeedaba la xiro, marki ay halbeega 1000 kor u dhaaftay dadka laga helay cudurka ee deggan xaafadaas. Dadka uu ku dhacayo cudurku ayaa kor …
Aarhus: Caabuqa Karoonaha, Xaafadda Vor Frue Sogn, ayaa qarka u saaran in la xiro Læs mere »
Cayaaraha / Af Farah
Cayaar xiiso badan ayaa dhemartay labada koox ee kubada cagta Fiuk iyo Morud IF oo ka wada tirsan Seria B magalada Odense ee dalka Denmark. Qeybta hore ee cayaarta, markii ay socoday 10 daqiido waxaa u surtagashay in ay kooxda Fiuk in ay dhaliyaan goolkii koowaad keddib, waxay la wareegeen cayaarta daqiiqadii 34 waxay dhaliyeen …
Kooxda kubada cagta Fiuk oo 4-2 kaga badisey kooxda Morud IF Læs mere »